*ထူးအိမ်သင်(၅)နှစ်ပြည့် *သတိတရနဲ့ရေးလိုက်ပါတယ်.ကျမရဲ့အကြိုက်ဆုံး အဆိုတော်တဦးပါ.
သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကို ကျမရဲ့အကိုနဲ့ အမြဲတူတူဂီတာတီးပြီး ဆိုနေကြပါ.(၉၃)ခုနှစ်.ဇူလိုင်လ(၁)ရက်.
အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ မှာတကိုယ်တော်ဆိုခဲ့ပါတယ်. ကျမကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့ရပါတယ်.
လေးဖြူကလဲ သူမွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့*အလင်းရောင်*သီချင်းလေးကိုစဆိုခဲ့ပါတယ်.
လေးဖြူကအလင်းရောင် စီးရီးမထွက်သေးပါဘူး. ကျမနဲ့စံပါယ်ဦးတေးသံသွင်းမှာတွေ့လဲ
သူကိုမိတ်ဆက် ဘာလမ်းမှာတွေ့လဲနုတ်ဆက် နောက်ကျမတို့သူငယ်ချင်း တွေကိုသူသိလာခဲ့ပါတယ်.
ခင်ဘို့လဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်. နောက်တခုကတော့ အမေတွေအတွက်သူဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ
ကြောင့်လဲသူကိုလေးစားမိပါတယ်. သူထွက်ခဲ့သမျှ သီချင်းတွေကို ခုထိအလွှတ်ရခဲ့ပါတယ်
ကျောင်းစာသာမေ့ရင်မေ့မယ် ကျမကို သူငယ်ချင်းတွေကထူးအိမ်သင် သရဲလုိ့တောင် ပြောခံရပါတယ်.
ကျမလိုဘဲလူတော်တော်များများလဲ ကြိုက်ကြတယ်နော်. သူနဲ့ဖရေဇာမှာ တွေ့ရင်ဘာသီချင်းလေး
တွေကကောင်းတယ် လူငယ်တွေအတွက်သီချင်းများများစပ်ပြီး ဆိုဘို့ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဘားလမ်းကိုညနေဆို ကျမတို့အုပ်စု သစ်မွှေးအအေးဆိုင်မှာထိုင်ရင် သူကိုစံပါယ်ဦးရှေ့က
လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ရှာရတဲ့မျက်လုံး တခါခါမတွေ့ပါဘူး.
ကိုထူးအိမ်သင်သီချင်းတွေက တကယ်ခံစားချက်တွေနဲ့ရေးခဲ့တာပါ နာရီပေါ်ကမျက်ရေစက်များ အခွေထွက်တုံးကဆို ကျမကငယ်သေးပါတယ်. ၈တန်း ၉တန်းလောက်ဘဲရှိပါသေးတယ်.
သီချင်းအားလုံးကိုကြိုက်ခဲ့ရတာပါ.နောက်အခွေတွေလဲ အားလုံးကြိုက်ပါတယ်.“ရင်ခုန်ရင်အချစ်”ဆိုတဲ့သီချင်းကတော့ ကျမအကိုနဲ့ တူတူသိပ်ဆိုခဲ့တာပေါ့
“ဝေးသွားတဲ့အခါ” အို အားလုံးကြိုက်ပါတယ်.
နောက်အမေအတွက်ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ အမေ့ရဲ့ ဒုက္ခအိုးလေး,အမေ့အိမ်,မေမေနေကောင်းလား,
အမေ့အေးရိပ်,ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါအမေ,ကျေးဇူးပါမေမေ,ကျမ ဆိုနေကြတွေပါ.သူကို့ ကိုငှက်လို့ ခင်တဲ့လူတော်တော်များများခေါ်ကြပေမဲ့ ကျမတို့အုပ်စုကတော့ သူကိုမှော်ဆရာကြီးလို့ခေါ်ကြတာပါ. ကျမတို့သူငယ်ချင်းအားလုံး သူကိုကြိုက်ကြတာပါ.
သီချင်းဆိုတတ်တဲ့ အကိုကြီးအသံအတက်အမြင့်၊ အဖြတ်အတောက်၊ အားလုံးကိုပိုင်နိူင်စွာ၊
ဆိုတတ်တဲ့ သီချင်းရသအမျိုးမျိုး၊ သံစဉ်အမျိုးမျိုး၊ ဆိုတတ်ပါတယ.်လူငယ်တွေတော်တော်ကြိုက်နှစ်သက်
တဲ့အသံမှော်ဆရာ ကိုထူးအိမ်သင်ပါ. ဘာဂျာလေးကိုထုတ်ပြီးမှုတ်တတ်တဲ့ ကိုထူးအိမ်သင်
တယောက်သူချစ်တဲ့ သူရဲ့ပရိသတ်တွေ ကို(၁၄.၈.၂၀၀၄)နေ့မှာ ခွဲခွားသွားပါတယ်.
ကျမလေးစားတဲ့ ကျမချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ရဲ့နောက်ဆုံး ခရီးကိုကျမကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ ခွင့်ရခဲပါတယ်.
အမှတ်တရအနေနဲ့ သူရဲ့ယက်တောင်လေး တောင်မရခဲ့ရပါဘူး.လူပေါင်းများစွာလိုက်ပို့ကြတဲ့ သူပရိသတ်တွေ
အများ ကြီးကြားထဲ မနည်းထိုးပြီး ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်.ကိုယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တယောက် ကိုဆုံးရှူံးခဲ့ရတာ
နှမြောတသ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ မိပါတယ်.
သူနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ရေးမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပါ.ကျမသီချင်းလို့ခံစား တတ်ခဲ့တာသူကြောင့်ပါ.
သူဘာကြောင့်ဘဲ သေတာဖြစ်ဖြစ် ကျမစိတ်ထဲမှာတော့ သူမသေပါဘူး.သူသေပေမဲ့ သူအသံကတော့
သူအတွက်အမှတ်တရ အနေနဲ့ရေးလိုက်ရလို့ ကျမ ကြည်နူးခဲ့ပါတယ်.
ကျမစာလေးကိုနားခွင့်ပြုပါရှင်. ကျမလိုဘဲသူ့ပရိသတ်တွေလဲ ခံစားနေကြမှာပါ.
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, August 15, 2009 Links to this post
*သရက်ထောင်ရဲ့ထောင်ဝင်စာအမှတ်တယ*အကြောင်းလေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်၊(၁၉၉ရ)နိုဝင်ဘာလရဲ့ ဒုတိယအပါတ် ကျမထောင်ဝင်စာသွားရမယ်.ဈေးဝယ်ပြီးအပြန် မနက်မှဘဲချက်တော့မယ်ဆိုပြီး
ကျမလဲဘယ်သူကိုမေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစာပြီးအန်တီမြင့်(ကိုမိုးဇော်ဦးအမေ.)ကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်. အန်တီကဟုတ်တယ်သမီး မနက်ဖြန်အင်စိန်ထောင်ကိုသွားမေးကြည့် ဧည်တွေ့လုပ်လိုက်
(သာယာဝတီ)မှာကျမအမျိုးသားမရောက်ဘူး သရက်ထောင် အုပ်စုမှာသူပါသွားတယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်.
ကျမလဲမနက်စောစောအင်စိန်ထောင်ကိုသွားဧည့်တွေ့လုပ်စာပြန်ကိုစောင့်နေထောင်ဝါတာတဦးေ၇ာက်လာပြီးတော့ဧည့်တွေ့မှာသရက်ထောင်ပြောင်းရွေှ့လို့ရေးထားတဲ့စာဖြစ်နေပါတယ်. အိမ်ပြန်မေမေကိုပြောပြနောက်အန်တီမြင့်ရှိဖုန်းဆက်ပြောပေါ့အန်တီမြင့်ကသရက်ထောင် ထောင်ဝင်စာတွေ့နေကြဆိုတော့(ကိုမိုးဇော်ဦးကသရက်ထောင်မှာဆိုတော့)ဘယ်လို့သွားရမလဲ ဆိုတာမေးရပါတယ်အောင်လံကားကိုစီးဇက်နဲ့ဟိုဘက်ကမ်းကိုသွားရတယ်သမီးအောင်လံရောက်ရင် မနက်ကို၎နာရီလောက်ရောက်မယ်.ကားသမားကို*ဧရာဦး* တည်ခိုခန်းကိုပို့ခိုင်းလို့ရတယ်သမီး.
မနက်ကြတော့ ဟိုဘက်ကမ်းကူးရတာနီးတယ် ဈေးလဲသက်သာတယ်သန့်လဲသန့်တယ်.
ကားသမားတွေကလက်ပံတန်းမှာအပေါ့အလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ခနနားကြပါမယ်.လို့ပြောတာနဲ့ သားအမိနှစ်ယောက် အောက်ဆင်းအိမ်သာအရင်ဝင် ကော်ဖီသောက်အထမ်းလေးတွေနဲ့
ကျမလဲကားသမားတွေကိုပြောနင့်တို့ အမအထုတ်တွေမှားပြီးပေးလိုက်လား သူတို့လဲအံ့သြ
ကျမလဲစိတ်တွေပူရှာပေးကြပါအုံးအမအထုတ်တွေကိုပြောပြီးငိုချင်လာတယ.်သူတို့ကိုအပ်ထားတော့ တော်သေးတယ်သူတို့ပြန်ရှာပေးပါမယ်အမဒီမှာစောင့်ပေးပါမနက်ဆိုရင်လိုက်ရှာပေးပါမယ်မရဘူးဟယ် အမယောင်္ကျားကို မနက်ထောင်ဝင်စာတွေရမှာ အစောကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ.
စိတ်ချပါအမတွေ့မှာပါဆိုပြီးပြောတော့မေမေနဲ့ကျမလဲတည်ခိုးခန်းမှာဆင်းအခန်းယူကုတင်ပေါ်မှာ ဟိုးတွေးဒီတွေးနဲ့မအိပ်ဖြစ်ပါဘူးမနက်ကြတော့ကျမကိုယ်တွေအရမ်းပူလာတယ.်မေမေကဆေးတိုက် သူတို့ကိုကျမတို့ပြန်စောင့် ခနနေတော့လာကြပါတယ.် ကားပိုင်ရှင်ကောင်းလေးနဲ့ကားမောင်းတဲ့
ကောင်လေး အမ ကျွန်တော်တို့ပြန်မတွေ့ရင်တန်ဘိုးငွေပြန်ပေးပါမယ်.ဟာမယူချင်ဘူးငါအထုတ်ဘဲ
အမ ပြန်တွေ့မှာပါ စိတ်မပူပါနဲ့ ကျမကဖျားနေတော့ ဘာမှပြန်မဖြေတော့ပါဘူး.အေးပါဟယ်
သူတို့လဲပြန်သွားကြတယ် မနက်၈နာရီထိပြန်မလာ ကြသေးဘူး ကျမစိတ်တွေအရမ်းတိုနေပြီး
ထောင်ဝင်စာတွေ့လို့မရတော့ဘူးဒီနေ့တော့လို့ထင်နေတာပါ၁၀နာရီလောက်ရောက်လာတယ် သမီးရေဆိုက်ကားသမား မှားယူသွားတာလို့ပြောတယ် သူနောက်ကိုလိုက်ယူနေကြတယ် ခန
စောင့်ရမယ် စိတ်ကိုထိန်းပါ.ကျမမေမေပြောတာတွေနားထောင်ရင်းနဲ့ ဆိုက်ကားသမားကိုဘဲ
ဒီမှာဈေးပြန်ဝယ်ရမယ်. နောက်မေမေကခွင့်မရဘူး. ကျမအတွက်အချိန်ကမရှိစဉ်းစားကြည့်တော့
ဘယ်လို့မှာ အဆင်မပြေဘူး စိတ်တိုတာအထွတ်အထိတ်ပါဘဲ.၁၁နာရီလောက်ကြတော့ ကျမကို
ကားသမားလေးလာခေါ်တယ်အမတွေ့ပြီးပြန်ရပြီးအမကျမလဲဘယ်ပြောကောင်းမလဲ ငယ်သေးတော့စိတ်ကိုမထိန်းနိူင်ဘူး မှားယူသွားတဲ့ဆိုက်ကားသမားလေးကို ရန်တွေတွေ့
ကျမလဲအထုတ်တွေယူ ဘာကိုမှမစစ်နိူင်ခဲ့ပါဘူး ငါပြန်လာရင်နင့်ကိုအမှုလုပ်မယ်.နင့်စောင့်နေပါ
သူကထောင်ပြောင်းလာလို့ပါ နောက်အပါတ်ဆိုမရှိတော့ပါဘူး လိုပြန်ဖြေတယ်သူတို့ကအချိန်ပြည့်ပြီး
တွေ့ရတော့၄၅မိနစ်ထောင်ဝင်စာလာဘို့ လုပ်ရတာလူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်း တွေ့ရတော့၄၅မိနစ်.။
ခုဆိုထောင်ဝင်စာသွားရတာ ပိုဆိုးပြီးကုန်ဈေးနှုန်းက ကြီးကြီးထောင်ဝင်စာပေးမတွေ့ရင်လဲ ဒီအတိုင်း
ပြန်လာခဲ့ရထောင်ဝင်စာတခါသွားဘို့ကုန်ကြငွေသောင်းဂဏန်းမရတော့ဘူးသိန်းဂဏန်းဖြစ်နေပါပြီး ထောင်ဝင်စာတွေ့နေရတဲ့မိသားစုတွေတော်တော်ရုံးကန်ရမှာပါဘဲလို့ဒီစာလေးရေးနေချိန်မှာ မြင်နေခဲ့ပါတယ်.ကိုယ်ချင်စာနာမိပါတယ် အပူတကာအပူထဲမှာ ဒီအပူကိုမှီမှာမဟုတ်ပါဘူး.
ဆရာလိမ့်ပြီးခေါ်လာခဲ့တာဘဲဆိုပြီးသားအမိနှစ်ယောက်ပြောရင်းနဲ့အောင်လံပြန်ရောက်ကားသမားနဲ့ တွေ့နင့်ဖာသာလုပ်တော့ ဟယ်ငါအထုတ်ယူတဲ့လူမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူး ဘာမှလဲမလုပ်ချင်
တော့ဘူးအမကိုသူတို့စောင့်နေကြတယ် ဆိုတာနဲ့ လိုက်သွားပါတယ် ဟိုရောက်တော့ခလေးလေး
ကိုနိူ့တိုက်ပြီးအမရယ်တောင်းပန်းပါတယ.်သူမရှိရင်ကျမမှာခလေး၅ယောက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါ. ဆိုပြီးတော့ဆိုက်ကားဆရာရဲ့အမျိုးသမီးကတောင်းပန်နေတယ.်ကျမလဲသူသောကကိုကြည်ပြီး ငါလဲသူလုိ့ပါဘဲလေ.
သောကမီးပင်လယ်ထဲမှာ နေနေရတာပါ အပူတွေကမတူပေမဲ့ နောက်ကိုမလုပ်ကြနဲ့ကိုယ်လုပ်ရင်
သူကလဲ သရက်ထောင်ထဲမှာ သူအမျိုးသမီးအန်တီရီနဲ့ စကားပြောအန်တီရီရဲ့လက်ရာကြက်သား
ဘယ်တော့မှဒီစစ်အစိုးရကို ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး လူတွေသတ် သံဃာတော်တွေကိုသတ်နေ
တဲ့ဒီစစ်အစိုးရအပြစ်မရှိတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုထောင်ချသူတို့မင်းလုပ်သူတို့အုပ်ချုပ် ဘယ်တော့များမှာလူထုတွေ စိတ်သောကကင်းဝေး ကြရပါမလဲ.မတရားဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်မှုတွေ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, August 14, 2009 Links to this post
ကျမရေးချင်တဲ့ အကြောင်းလေးကညငှက်လေးတွေရဲ့ဘ၀တချို့ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးကိုတင်ထား
ကောင်မလေးက ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမှာနေတယ် သဲသဲကတော့ပျော်လို့ဆိုဘဲ ။
ရှိတယ်အဖေကလဲလေဖြတ်နေတယ် အမေကလဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး .။
တနေ့မှာကျမကဟင်းချက်နေတာ ကျမယောင်္ကျားကအလုပ်သွား သားကိုသူရဲ့ဂွေလေးထဲမှာထားပြီး
တံခါးသံပန်းကိုစေထားလိုက်တယ် ခနကြားတော့သားအသံမကြားတော့ဘူး ကျမထူပူပြီးဘာလုပ်ရမှန်း
မသိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် သားကိုခေါ်လို့မကြား နောက်မှာသူတို့အခန်းမှာဆိုတာသိရတယ် ကျမလဲပြန်ခေါ်
သူတို့ကလဲဒီနေ့ အလုပ်ပါးတယ်မကြီး မောင်လေးကိုထိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတောပြောကြပါတယ်။
ကောင်းကောင်းနေကြပါ အမအလုပ်စုံစမ်းပေးပါမယ် ငါညီမတို့၇ယ်သူတို့ကျမကိုပြောသာပြော
ရပါတယ်သူတို့ကစိတ်မဝင်စားပါဘူး သူတို့ဘဝအကြောင်းတွေပါ သူတို့နေတတ်နေပါပြီး။
ကခေါင်းပုံဖြတ်သေးတယ် တညကို၃သောင်းရရင်းသူကိုတသောင်းခွဲပေးခဲ့ရသေးတယ် လူအချင်းချင်း
လဲHIVနဲ့ခုတော့ဆုံးသွားပါပြီး ညငှက်မလေးတွေ့ရဲ့ဘဝ လေးကိုစာနာရင်းနဲ့နားလိုက်ပါအုံးမည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, August 12, 2009 Links to this post
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, August 11, 2009 Links to this post
မေးပေးခဲ့တဲ့ ကိုသားကြီး တို့ စုံတွဲကူညီမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်.၊ကျမကအဲဒီအချိန်မှာပူထူနေတာပါ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, August 10, 2009 Links to this post